Kambodza: Iza no nanome baiko amin’ny fanakanana ireo vohikala mpanohitra? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2011 19:11 GMT
Ny volana lasa teo, nisy vohikala iray manohitra ny fitondrana voasakan‘ireo Mandrindra ny raharahan'ny Aterineto (ISPs) any Kambodza. Nandà nireo ISPs taty aoriana fa hoe nahazo baiko avy any amin'ny governemanta izy ireo hanakana ireo vohikala maro ity. Nanitrikitrika ihany koa ny governemanta fa tsy politika ny fanidiana ny vohikalan'ireo vondrona mpanohitra. Soa ihany, niverina teo no eo ny fahafahana miditra amin'ilay vohikala.
Kanefa ny olana amin'ny faanivanana vohikala any Kambodza dia mbola mitohy manerika tamin'ity volana ity satria dia namoaka taratasy iray avy any amin'ireo manam-pahefan'ny fampahalalam-baovaon'ny governemanta ireo vondron'ny media, izay nangataka ireo ISPs mba ny anivana ireo vohikala izay manimba ny fisainana sy fomban-drazana Kambodziana.
Sieng Sithy, Talen'ny mpisolo vavan'ny Fanatsarana ny politikan'ny Fifaneraserana any amin'ny MPTC, nanoratra mailaka ho an'i Ezecom, Metfone, Citylink, Digi, AngkorNet, WiCam, TC, Camnet, ao amin'ny aterineto sy Camintel mbq hisaorana azy ireo amin'ny “fiaraha-miasany” tamin'ny fanakanana ny fidirana tamin'ireo vohikala maro, aniusan'izany ny KI-Media, Khmerization sy vohikala mampisongadina ny asa-tananan'ny mpanao sary mahatsikaiky mikasika ny politika ataon'i Sacrava.
Nanome fanambarana mampisavoritakany governemanta tamin'ny firaiketan'ity taratasy ity. Manohy mitompo teny ny Minisitra fa tsy ataon'ny governemanta izany fanivanana vohikala izany. Ireto misy ampahany sasany tamin'ilay taratasy mampihady hevitra:
Ny mailaka, izay nataon'i Sieng Sithy sonia, talen'ny solom-bavam-bahoaka ao amin'ny fanatsarana n,y politikan'ny minisitra, mangataka an'ireo mpandrindra ny raharaha WiCam, Telesurf ary Hello.
“Hitanay fa mbola tsy nandray fahapaha-kevitra ianareo, noho izany dia iangaviana ianareo mba handray izany izao dieny izao”
“Ireto ambany ireto [ireo] vohikala.”
“Ombieny ombieny, amin'ny tranga tsy hisian'ny fiaraha-miasa dia andraikitrareo manokana izany”
Mitaraina ireo mampiasa Aterineto any Kambodza efa ora maro izao ireo vohikala ireo no tsy afaka idirana tamin'ity volana ity. Miteny ireo ISPs fa olana ara-teknika izany.
Sary mifono fanakianana nataon'i Sacrava
Ny Fivondronana Kambodziana ho an'ny Fandrosoanasy ny Fiarovana ny Zon'olombelona (LICADHO) dia manameloka ilay fanakanana vohikala marobe voatatitra
…Ny aterineto irery ihany no mediam-peo sy sary tsy tena voafehin'ny governemanta. Ny fanivanana vohikala tsy miray hevitra aminy dia manamarika dingana lehibe mankany ami'ny fampahoriana ny tontolon'ny media
Mila ny fanomezam-panazavan'ny ISPs ho an'ny mpanjifany ny antony nanekeny hiray tsikombakomba amin'ny fangatahan'ny governemanta hanivana ireo vohiala ihany koa ity vondrona ity
Nanao “fangatahana” fotsiny ve ny governemanta ny amin'ny fanakanan'ireo mpandrindra ny ISP ireo vohiala sasany? Raha izany, mila fanazavana marina avy amin'ny ISPs ireo mpanjifa ny amin'ireo antony nisafidianan'izy ireo ny hiray tsikombakomb. Ny fanafenana fialan-tsiny ambadika dia mahatsonga azy ieo fotsiny ho mpiray tsikombakomba amin'ny fanentanana ny fanivanana. Ireo mpanjifa voakasika izany dia tokony hiantso ny ISPn'izy ireo ary hangataka fanazavana matotra amin'ny tsy fandehanan'ireo vohikala manohitra ara-politika. Ny tsara kokoa aza, tokony handà ny fangatahan'ny governemanta ny ISPs rehetra ary hamerina ny fahafahana miditra amin'ireo vohikala izao dieny izao.
Mendrika ny hahalala ireo mpanjifa raha manipy ny volany ho ana tamban-jotra izay manampy ny fanentanan'ny governemanta amin'ny fanivanana.
Ny Komity Fiarovana ireo Mpanao gazety ihany koa dia miahiahy momba ny hamafin'ny fanivanana media any Kambodza.